दम्पतीको सम्बन्धमा भाँजो हाल्दैछ सामाजिक सञ्जाल ? – Nepalpostkhabar
दम्पतीको सम्बन्धमा भाँजो हाल्दैछ सामाजिक सञ्जाल ?
nanda । ६ असार २०७७, शनिबार १४:५३ मा प्रकाशित
कतिपय श्रीमान् श्रीमतीको झगडा सामाजिक सञ्जालकै निहुँमा हुने गर्छ । पासवर्डको विषयमा झगडा भएर दाम्पत्य सम्बन्ध टुट्न पुगेको घटना पनि समाजमा भेट्न सकिन्छ । अहिले दम्पतीबीचको सम्बन्धविच्छेदको घटना कहाली लाग्दोगरी बढेको छ । त्यसमा एउटा प्रमुख कारण सामाजिक सञ्जाल भएको छ ।